décembre 2016 - Page 60 sur 60 -
Tsy fanarahan-dalàna:SEKOLY ZATO AHIANA HIKATONA
01/12/2016 admintriatra 0
Hatramin’ny fiandohan’ny taom-pianarana 2016-2017 teo dia niroso tamin’ny fanaovana sivana ireo sekoly tsy miankina amin’ny fanjakana ny teo anivon’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena manoloana ny firongatry ny sekoly miorina etsy sy eroa tao anatin’ny taona vitsy. Nanjakan’ny …Tohiny
Mpianatra mendrika:NITSIDIKA NY ANTENIMIERAN-DOHOLONA
Nohararaotin’ireo mpianatra avy any amin’ny faritra, nafarana hanatrika ny hetsika rehetra nandritra ny Frankofonia ny herinandro teo, ny fotoana nandalovany teto an-drenivohitra hanaovana ireo karazana fitsidihana. Omaly dia mpianatra miisa 14 avy any amin’ny faritra …Tohiny
Hapetraka ny ara-dalàna. Raha ny nambaran’ny filohan’ny komity mahaleo tena misahana ny fifidianana (CENI), Hery Rakotomanana, andro lehibe ho an’ny fifidianana anio. Araka izany, hanomboka anio, 1 Desambra ihany koa, ny fotoana vaovao hanavaozana sy …Tohiny
Ilaina ny fahazoana ilay fiara tsy mataho-dalana avy amin’ny fanjakana, saingy mbola tsy fotoana tokony hitakiana izany izao, raha ny hevitr’ireo solombavambahoaka izay nandany ilay lalàna mamaritra ny teti-bolam-panjakana 2017. Ny fanalefahana ny fahasahiranan’ny vahoaka …Tohiny